Phakamisa izingane ngaphandle ukuthetha, izinsongo nokuhlasela - kungenzeka okuthile lokho amaphupho kangaka umama. Wonke umuntu wesifazane ofuna ukufunda. Namuhla sifunda indlela yokutshala umuntu. Ezemfundo ngaphandle bamemeza, iziqalekiso, ukushaywa kwezijeziso kungenzeka, futhi zonke izimfihlo kanye ubuqili le nqubo ekulesi sihloko. Ngu abazali nje ezidinga Yebo, ukusetshenziswa zonke izindlela. Khona-ke ngeke aphumelele ekubumbeni ubuntu indodakazi yabo noma indodana.
Izinsika ezintathu lapho lengiyo inqubo nemiphumela ingane
Into abazali kuqala ucabange uma le nkulumo kanje: izingane - isijeziso, isimo sabo kungaba ezahlukene. Ngokwesibonelo, le ndaba yokuvinjelwa imidlalo ngaleso computer, i-TV, kwencazelo imvuthu ekhoneni. Nakuba omama abaningi futhi obaba bazi ukuthi lena akuyona indlela efanele, futhi ozama ukushintsha into, kodwa ngokushesha nje lapho umntwana wabo ukwenza konke futhi akukubi, inkinga uhlala ezingaxazululeki futhi. A zakovyrka ukuthi abazi indlela ukukhulisa ingane ngaphandle izenzo ezinjalo kabi engathandeki. Nokho, kungcono empeleni kabi.
Izici imfundo yezingane isijeziso nokukhalela It yangempela eziyisisekelo ezifana:
Imashi omkhulu wokudlulisa imizwelo.
Indlela ukukhulisa izingane ngaphandle ukuthetha noma isijeziso, uma umntwana ilingisa izenzo kwabazali bazo, futhi uphinda kubo amazwi nezenzo ezimbi? Ukuze uqale nge umama nobaba kudingeka uqaphele ukuthi akuzona nje isibonelo sokuba amadodana abo namadodakazi abo, enhle okufanele silwele. Umntwana njalo ukubukela kanjani abazali liziphathe ekhaya, phakathi kwabangane, indlela ukuxhumana yodwa nabanye abantu, indlela adle, ukuphumula nokunye. N.
Futhi zonke izenzo ezenziwe omama nobaba ukusiza imvuthu ukuze ubone isithombe esikhulu kanye aqonde ukuthi yini enhle futhi yini akuyona nokuthi ngokwabo kufanele kwenziwe ezihlukahlukene ezimweni.
Ngaphambi okujezisa noma wamthethisa ingane ukuthi ungubani, isibonelo, isikhathi eside ihlezi potty nge amathoyizi, Ubaba kumele acabange futhi singakanani isikhathi ayihlala ngaleli cala futhi ukuthi uthatha naye igumbi lokuzisiza iphephandaba puzzle ama-crossword. Umama, isibonelo, akufanele agxeke izinyane lokho anakho isikhathi eside kakhulu ubuka ithelevishini, uma uchitha phambi isikrini blue uqobo namuhla. Yilezi izibonelo nje ezimbili, futhi ngakho-ke kuyadingeka ukuba umfuziselo kuzo zonke ezinye izimo, futhi kuphela uma abazali ukuzwisisa futhi ulungise amaphutha abo, bakwazi ukuqala ukuqeqesha isijeziso. Izimfihlo ukuze Training ngempela ayikhona imfihlakalo noma puzzle. Konke ngokuyisisekelo itholakala ukuziphatha nezenzo Baba nawe mama, ngakho kufanele uqale nge ngokwakho.
Indlela ukukhulisa ingane ngaphandle bamemeza nezinhlawulo uma, isibonelo, ngokukhethekile waphonsa ifoni yakho emanzini noma ngephutha wacosha ipuleti, uphonse ke waya crack? Empeleni, inkinga ibangelwa kulesi simo Ayihambisani ingane nomama noma ubaba. Yiqiniso, izinto abaphukile futhi abazange babe ukulungisa, kodwa uma ulazisa kubo, khona-ke ukuthi kungani umfana wakho noma intombazane lalingabulawa kalula uzithatha? You umane kudingeka ufihle kude izingane izinto ezinjalo, bese izinkinga eziningi ziyoxazululwa.
Futhi iphuzu lesibili - indlela yokukhulisa ingane, hhayi ukuze amjezise icala ezibonakala esingathí sina kangaka? Udinga nje ukukhuluma izingane zakho futhi uchaze ukuthi kukhona izinto ukuthi zingakwazi ukuyithinta, ngisho noma ufuna ngempela. Yini abazali ngenxa yomsebenzi eside isikhathi, ukhathele, ukuze athenge indlu kule noma ukuthi isihloko. Futhi ukukhuluma nengane yakho kudingeka buthule, ngaphandle bamemeza, iconsi, futhi uyoba umangale sizokuthinta kanjani le ngane. Phela, naye umama noma ubaba ukhuluma njengomuntu omdala, khona-ke uyozama ukuze baziphathe ngokufanele futhi ngokuzayo ngeke ekhuphukela lapho akadingi.
Okubonisa imizwa yabo yangempela - lokhu kuyinto isijeziso eyamukelekayo ngaphandle ememeza noma isihlamba. Indlela ukukhulisa ingane kuleli cala, uma engawuqondi emazwini akho, kuphela kwencazelo ke ekhoneni noma uyakhamuluka manje usebenza? Empeleni, ezimweni eziningi, ukusebenza uzokutshela kid ukuthi uphatheke kabi wena kakhulu, futhi manje uyacasuka kuso. Lokhu kuyoba engcono ukwedlula usebenzisa izindlela zakho evamile yokujezisa. Kid ngempela ukuqonda lokho owakwenza ngesikhathi esingafanele futhi elilandelayo ucabange kabili ngaphambi kokuthumela ngokuphinda iqhinga lakhe futhi. Kodwa abazali kufanele ungakhohlwa ukuba adumise umfana wakho noma intombazane, uma yena basilungisa isimo wacela intethelelo. Kuba njalo osemqoka kakhulu imfundo.
Imashi imizwelo kuyoba efanele nje obaba, ngoba ikakhulukazi ukhulume iqiniso lokuthi amadoda ungakhali futhi ungabonisi imizwa yabo ethinta inhliziyo. Nokho, indlela yokukhulisa izingane ngaphandle ukuthetha noma isijeziso, ngisho ngaphandle kokukubonisa imizwa yakhe? Akunakwenzeka lokho. Imizwelo zidlala indima ebalulekile ekwakhekeni umuntu ngaphandle kokusebenzisa sokubala ngokomzimba kanye nezinye unswinyo.
Izimfihlo ngalokho, indlela yokukhulisa ingane ngaphandle ukukhala: amaqiniso okusheshayo
1. Uma, umsindo eqinile abukhali izwi ulungisiswa ke umzali kufanele bacabangele ukuthi ingane kuze kube iminyaka emithathu abaqondi ukusabela ngaleyo ndlela futhi sizoxoxa ke nokuziphatha okwamukelekayo.
2. Uma pipsqueak ngenkani okwenza bebodwa ke ngizame ukukuchazela ngenye indlela, bonisa ngesibonelo ukuthi bayakuqonda.
3. Indlela ukukhulisa ingane ngaphandle ukuthetha noma jeziso umsindo abukhali izwi livela izinkinga sangaphakathi umama noma ubaba? Abazali kudingeka afune usizo izazi zokusebenza kwengqondo, futhi uyaqiniseka ukuthi ukusiza ukubhekana nalesi simo. Ngemuva kokusebenzisa ngokumemeza, wena nje ukwandisa umhosha phakathi kwakhe nabantwana ingane.
4. Kuyadingeka ukuhlukanisa phakathi ithoni oluphakeme akahlanye. ithoni Angry uyokwenza kucace ukuthi umntwana ukuthi akazange ashade, futhi amnike ithuba lokuchaza konke futhi ukulungisa inkinga. Kodwa ukukhala okwesabisa ingane yakho kuphela, futhi ingane kungenzeka ngisho kokwesaba, ukwethuka, yena uyakhala. Futhi ngisho nangemva wathulisa phansi, basalokhu bengakakwazi siqonde lokho okwenzeka.
5. Ukuthetha ingane ngecala bekhohlisa ngokuyisisekelo okungalungile. Kid angase anqume ukuthi lokhu kuyinto evamile ekuxhumaneni kanye maduze liziphathe ngendlela efanayo.
6. Zama ukusebenzisa umsindo eqinile futhi abukhali ezinjalo izwi ngokukhulumisana abakini. Indlela ukukhulisa ingane ngaphandle kokusebenzisa isu enjalo? ithoni ezolile, isikhundla liqinile, ikhono basuse - yilokho okudingayo. Akumelwe sikhohlwe ukuthi scream kuthinta isimiso sezinzwa, kanye nesidingo khumbula: lokhu isilinganiso nakanjani kuyoholela umdlavuza, isifuba somoya, kanye nezinye izifo eziyingozi.
Indlela ukukhulisa ingane ngaphandle ukuthetha nesijeziso: imibono izimfihlo kubazali
Amathiphu alandelayo zizongena futhi posodeystvuyut ukuqinisekisa ukuthi ingane baba nekapriznym esilalelayo kwamasiko futhi:
1. Setha ubuholi.
2. ukurhunyezwa yokuziphatha kuvunyelwe futhi impermissible.
3. Ukuhambisana nemithetho.
4. Izindlela ukukhuthazwa.
5. Isikole nokuziphendulela.
6. Ukuziba iconsi.
Umndeni ngokucacile umholi e ubuhlobo ingane ukuba umama noma ubaba, futhi ingane - isigqila, futhi abalokothi, hhayi okuphambene nalokho. Uma pipsqueak kudala njengoba iminyaka 3 noma 4 ziwumthwalo izifiso zayo abazali, kusho ukuthi-ke spoilt. Futhi ngenkathi kungcono sekwephuzile, umama nobaba kumele sizame ukukwenza ngenhloso yokuthuthukisa simo, ngakho-ke musa usikhiphele umntwana, futhi azisebenzi amandla kukho, kokumphoxa futhi ememeza.
Kakade kusukela ngineminyaka engu-abafana abathathu namantombazane odinga ukukwazi ukuthi akubi abazali njalo kungaba niye nibahlangabeze, ngakho-ke kuyadingeka ukuba abafundise ukuhlola kahle isimo futhi ngeke ahlale phezu kwekhanda omdala.
Kanjani ukuze bakhuphule imvuthu isijeziso? Ekuqaleni, udinga esemncane (1.5 - 2 iminyaka) ukubeka izinto eziza kuqala e uhlobano phakathi unina, noyise nengane.
Kuchazwa imingcele yokuziphatha esenqatshelwe futhi singavumeli
Indlela ukudala ungubani yezingane ukuze ingane waziqonda phakade ngangokunokwenzeka futhi akakwazi ukwenza? Kuyadingeka ukusungula imingcele ecacile nokuziphatha nezapreschonnogo akuvumelekile.
ngokulandelana okunengqondo - izimiso okufanele ilandelwe abazali zokufuna ukukhulisa encane ngaphandle enza obhince ibhande nezinye izindlela.
Uma, ukwenza isibonelo, izolo bavunyelwe ukudonsa nomsila we cat-ke, namuhla nakusasa, futhi, unga. Kungenjalo izingane ngeke kudidaniswe, udidekile futhi baqala ukwenza ekhethekile.
A incazelo ecacile kwezithibelo kwenza ukuphila kube lula ukuze umntwana, futhi ngesikhathi yokukhansela yabo kuphela inkimbinkimbi ke.
Ukuze uzwisise ukuthi yini nokuziphatha okuvunyelwe ikuphi, udinga ukugxila nokunethezeka. Uma encane izinkinga ukuziphatha (isib, imvuthuluka iqala ukugibela ngesisu likababa kanye eside Ugxumela, kwakuya kuba nzima iba kuyise), ibakhathaze, kubalulekile ukuthi ubeke umkhawulo, okungukuthi enqabela ukukwenza. Nokho, ngabe yikuphi hhayi ukumemeza sithi: "Cha!" Nge ubuso lwalugobile ukuphazamisa ingane, ukuyichazela ukuthi uyise ubuhlungu bese ingane yakho ukuqonda konke futhi uzoyeka nikwenza.
Umsebenzi wawusuvinjelwe kanye nokugqugquzela - kukhona amaphuzu amabili asemqoka ukuthi kumelwe nakanjani kwenziwe abazali.
Nge imithetho ubaba nomama ungayeki ingane ukwenza imisebenzi eyingozi kungavunyelwe, futhi abe yisikhuthazo, bekhulisa ingane kahle injabulo eyamukelekayo.
Ngokwesibonelo, uma indodana ufuna ubusuku obuhle futhi sawubona konina ke kukuhle, bese-ke angakhuthaza Ukumomotheka, amazwi amnandi, kiss.
Kodwa uma uwela phansi, ongqongqozayo kwezinyawo zakhe, khona-ke le ndlela yokuziphatha noma kunjalo ayikwazi ekhuthaza: kubalulekile ukuba ahoxe kokushiya umfana yena noma uphoqelekile ukubeka ngezinyawo zabo, wafaka le ibhayisikili - okungukuthi, ukukhombisa ukuthi kungaba njengokungathi okuhle ke sikholelwa ukuthi umama.
Esikolweni kuya umthwalo
Indlela ukukhulisa ingane ngaphandle ukuthetha noma isijeziso, ukuthi waqaphela ukuthi izenzo zakhe ezimbi kungaholela imiphumela emibi? Kuyadingeka ukuba accustom ukuba ubulungisa, futhi ngaleyo ndlela imvuthuluka kuyoba uyazi ukubaluleka nalokho ababekusho, wayengeke azi ukuthi kuwo, kakhulu kuncike.
Ngokuvamile unina ufaneleke misdeeds yezingane ukuze indodana noma indodakazi yakhe ingahle ukuqonda, futhi ngenxa yalokho ongathwali ngayekwenzile kwesibopho. Futhi isibonelo esivelele bekhulisa olungafanele ingane, ngoba ngokushesha isijeziso ongakwazi ukuzenza.
Umuzwa umthwalo wemfanelo ziqondakala umntwana lapho umama nobaba ungagxambukeli futhi musa xhoxha impumulo yakho yonke indawo lapho akudingekile (isibonelo, ehlanzekile indodana yakho noma indodakazi ngemva yena wadlala).
Ngakho-ke, ukuthi ukukhulisa ingane ngaphandle bamemeza nesijeziso, benza konke abangakwenza ukuze ingane yakho wedwa baziqoqele uma wenza lokudlela ekhishini, bese uyosisusa elilodwa ngemuva; amathoyizi ehlakazekile - ke uzibeka ebhokisini. Umama angasiza kancane, kodwa musa ukufeza noma iyiphi umsebenzi ke.
Izingane zethu bahlakaniphile kangangokuthi ngisho kusukela zisencane uqale lokuxhaphaza abazali babo. Lokhu indlela yokulawula umama omuhle, uma kuhloswe ukuba bazuze. Kodwa uma izingane bagxile aphethe ukugoba ngaphansi kwakhe omdala, kufanele umane indiva. Uma kungenjalo, kuyoba imfundo ingane nje, futhi abazali bakhe.
Emphakathini wethu akunakwenzeka ukufeza okuthile usebenzisa iconsi noma ukukhala. Ngakho-ke, hhayi ukulalelisisa ukuze lokhu kubonakaliswa ezazizozuzisa zezingane, ngaleyo ndlela abazali basize izingane zabo ukuthuthukisa futhi ufunde ukuzulazula.
Uma umama akulungile
Kukhona izikhathi lapho abazali futhi sin futhi ngezinye izikhathi musa aziphathe ngendlela ofuna. Ngokwesibonelo, umama, ngaphandle kwesizathu yawela phezu ingane ngesikhathi lapho laliphathelene ububele ebusweni, noma, isibonelo, amshaya manje usola yena salokho. Futhi izingane uzokhumbula Kulezi zimo kahle kakhulu, futhi umsebenzi umzali okwamanje lesifanele uqobo indaba. Okungukuthi, kubalulekile ukuba bavume amaphutha abo futhi axolise imvuthu. Kuyadingeka ukuyichazela kahle ukuthi oyithukuthelele bese qiniseka simcele ukuba asithethelele. Futhi ungacabangi ukuthi ecela axolise, uphonsa idumela lakho phambi kid. Kunalokho, njengoba ubonisa inkambo efanele yesenzo kanye ngokuzayo, uma indodana noma indodakazi uziphatha ngendlela engalungile, yena futhi ngeke ucele intethelelo.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela yokukhulisa ingane ngaphandle ukuthetha noma isijeziso, saqonda izimiso eziyisisekelo futhi izimfihlo lokhu umzimba eziyinkimbinkimbi. Safunda ukuthi siqu Ngokwesibonelo, incazelo kanye ukubonisa imizwa yabo - lawa okhiye main ekwakhekeni ngempumelelo umuntu. Futhi lokho kuyoba into ebuhlungu nor enza ingane yakho - musa ukusheshe wakufaka ekhoneni noma osebenza amandla kuso - ekuqaleni Sizohlola uqobo, isimo, zonke ahlaziye ngokucophelela futhi ngokuqinisekile nikwazi kahle aphume isimo futhi ubonise ingane yakho isibonelo esiphelele.
Eyesibili ngenyanga zokuphila ngayo lapho usana: iphupho, uhamba nokuthuthukiswa
Ukondla ingane ngesikhathi unyaka 1: odinga ukukwazi
Pilorospazm izinsana: izimpawu, uphethwe, izimbangela kanye nokwelashwa
Spray Miramistin. Kungenzeka yini ukuba abhece emakhaleni womntwana?
Zinc sulphate: izici ukusetshenziswa
Umshado wephupho - linda izindaba
Funda kabanzi mayelana nokuthi isifundo
Buckwheat e multivarka "Redmond" - isidlo esilula ubuchwepheshe elula
Mini-echibini for yokugezela: usayizi, isithombe, ukufakwa
Umlando Omfushane Nikitina Ivana Savvicha futhi amaqiniso athakazelisayo ngokuphila kwakhe ngenxa izingane
Ungakhetha kanjani i-laser engraver yekhaya lakho? Amathiphu nempendulo mayelana nabakhiqizi